Minusinskaya eziyize, obizwa nangokuthi Intermountain umkhombe, sise umngcele Khakassia futhi Krasnoyarsk. Emhlabeni umcengezi ezinde izintaba. umngcele wayo oseningizimu futhi eningizimu-ntshonalanga lufrenyiwe ngu izintaba yaseNtshonalanga Sayan. North-western futhi ohlangothini olusentshonalanga ezizungeze "dogging" Abakan Range, nasempumalanga itholakala Vos Sayan olunembile. Minusinsk Basin ivulelwe kuphela kusukela enyakatho - kukhona elula we West laseSiberia Plain. Elikhulu emfuleni Abakan, Yenisei, Chulym futhi Tuba zidlulisela esigodini sezintaba ezweni oluhlaza futhi evundile. Ngisho ku amagquma empumalanga umcengezi ikhula enhle pine ihlathi.
Minusinsk Basin idume izingadi zayo, okuyinto wasungula abadingisiwe Decembrists Krasnokutsky. Enye Decembrist ku Krivtsov igama encwadini ebizwa esifundeni laseSiberia Italy. Ngakho igama umcengezi ihlathi kwadingeka awulona ize - kungcono imvelo zahlukahlukene kakhulu futhi ecebile ezizungezile Minusinsk. Krasnoyarsk esifundeni ligcwele namachibi amahle ecacile sizungezwe nobhabhulini futhi ngokushesha emifuleni entabeni. izimfunda Rich enye ngosawoti emaxhaphozini futhi feather utshani emaqeleni, wayifaka ezintabeni alpine ezimfundeni, amakhulu elimnandi ngamakhambi kanye izimbali. Ingxenye ezintabeni ezizungezile esigodini embozwe ehlathini zasendle, okuyinto ecebile hhayi kuphela izinkuni, kodwa futhi ukubukwa zemabula ezibalulekile.
Ngaphezu izindawo ebabazekayo, Minusinsk Basin ugcwele yomlando. Ngisho kwamanje, abavubukuli baye bathola kulo iminonjana nangenkathi ezahlukene kusukela Paleolithic ziphethe Ephakathi. izizwe ezihlukahlukene namasiko aye kwesokunxele "iminonjana" ka Emathuneni asendulo futhi izindunduma yokungcwaba, amanxiwa amadolobha namadolobhana, kule migede imidwebo, izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu itshe futhi imifanekiso izidalwa angaziwa. Ososayensi babenesithakazelo ikakhulukazi izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu itshe kwezilwane. Kuyinto masampuli yobuciko lasendulo bakhangwa eSiberia abavubukuli ekuseni.
Minusinsk wesifunda wayegcwele eziqoshiwe. Ezinye Umumo ezibaziweyo kusukela egwadle noma sandstone, isimo esiphansi Itshe ezinye zimelela imifanekiso okusezingeni eliphezulu Th ukuphakama tyrehmetrovoy. Okunabileko iqembu stelae nge isilwane buso, isipikili izigqoko ejwayelekile. Amalungu aleli qembu imele Itshe ngokuthi "Shira Baba." It ufana totem lasendulo maphakathi okuyinto ezibaziweyo bomuntu-isilo, nokuntula imihlobiso lasendulo. Licashe ukuboniswa ezilumayo empumulweni isilo sasendle, futhi ngaphezu kungabonwa elivunyelwa akha ubuso bomuntu. Zonke ndawonye limelela obunobunye kakhulu futhi engaqondakali Ukwakheka imfihlo ukuthi ingakamiswa kudalulwe. Ososayensi sebeqala nje ukwembula izimfihlo steles lasendulo. mlando 1960th kuphela baye bathola ukuthi cishe yonke Yenisei steles kwakuqoshwe tribal Okunev isiko, ngofuzo isihloko Okunevskaya Ulus, eduze eyayibonakala igodi.
Minusinsk Basin igcina umlando hhayi kuphela abantu bendawo. Ngabhekana ukucindezeleka futhi iqulo uGenghis Khan, oshiye umzila izinqaba eshile madolobha awile. Thola lapha izinsalela yezazi zasendulo nezindlela lapho mahele kusukela Central Asia, e-Arabhiya, Tibet futhi China. Sekuyiminyaka engaphezu mlando leminyaka abavubukuli ukuxazulula puzzle bese ubuyisela esimweni umlando le ngxenye iplanethi lasendulo.
Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke zero lokushisa - yamangqamuzana ukunyakaza ekunqanyulweni iphuzu
Museums: eCrimea kulondoloza esidlule zomlando wezwe
Yokusetshenziswa "Argolife". Izinkomba, izici isicelo kanye nokubuyekeza
"Ice Cream" - a Tulip noma dessert? Noma inhlanganisela yakho kokubili?
Indlela ukuphefumula ngesikhathi sokubeletha
Kwamenywa ukubaluleka ngamazwe has zokungcebeleka eBulgaria. "St Konstantin no-Elena" - omdala
Ikhekhe 'Inhliziyo': iresiphi nokupheka amasu